Community Wishlist Survey 2017/my - Meta
Community Wishlist Survey 2017/my
နည်းပညာအသိုက်အဝန်းအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အဦးဆုံးဆန္ဒများကို စစ်ဆေးသုံးသပ်ခြင်း: ဒီဇင်ဘာလ အကုန်ပိုင်း
ကနဦးသုံးသပ်ချက်များ တင်ပြခြင်း: ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ အစောပိုင်း
ဆန္ဒများအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း: ဇန်နဝါရီ–ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈!
ရပ်ရွာနည်းပညာအဖွဲ့သည် ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်း၏ အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စရင်းကောက်ယူခြင်းနှင့် ဖြည့်တင်းခြင်း ကိရိယာများအတွက်တက်ကြွသော ဝီကီမီဒီယာပံ့ပိုး သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဓိကလုပ်ဆောင်သော စီမံကိန်းများကို နှစ်စဉ် ရပ်ရွာဆန္ဒရှိသူများစရင်းစစ်တမ်းမှ တစ်ဆင့် ဝီကီမီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ဆုံးဖြတ်သည်။
တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တက်ကြွသော ဝီကီမီဒီယာပံ့ပိုးသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့အားလုပ်ဆောင်စေလိုသော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပြင်ဆင်မှုများအတွက် အဆိုပြုချက်များကို တင်ပြနိုင်သည်။ နှစ်တပတ်အကြာတွင်၊ သင်စိတ်ဝင်စားဆုံးသော အတွေးအခေါ်များကို သင်မဲပေးနိုင်သည်။
ဤစရင်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဂျာမနီဝီကီပီးဒီးယားတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာဆန္ဒများကိုလုပ်ကိုင်သော Wikimedia Deutschland၏ စေတနာရှင်စရင်းစစ်တမ်းအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန္ဒစာရင်း ပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်ရွာဆက်ဆံရေးအထူးကုအဖွဲ့ကထောက်ပံ့သည်။
Can I resubmitaproposal from previous surveys?(ဘာသာပြန်ပါ)
အဆိုပြုလွှာ အဆင့်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည်မဲပေးအဆင့်မစတင်မီအဆိုပြုလွှာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အားလုံးသည် သူတို့ထောက်ခံလိုသည့် အဆိုပြုချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ သင်လိုချင်သလောက် မတူညီသော အဆိုပြုလွှာများ အတွက်မဲပေးနိုင်သည်။ တရားမျှတသောမဲပေးမှုကိုသေချာစေရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများသည်သာမဲပေးနိုင်သည်။ အကောင့်အသစ်များဖြင့်သာမဲပေးနိုင်သည်။
ရေတွက်သည့် တစ်ခုတည်းသော မဲများသည် ပံ့ပိုးမှုမဲဖြစ်သည်။ ဆန္ဒအပြီးသတ် စာရင်းကိုထောက်ခံမဲ အများဆုံးအစဉ် အလိုက်သတ်မှတ်ပေးမည်။ သင်အဆိုပြုသူ ဖြစ်ပါက သင်၏ အဆိုပြုချက်အတွက် ထောက်ခံမဲကို အလိုအလျောက်ရေတွက်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်သောဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်အားပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဆန့်ကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြားနေမဲကို မှတ်ချက်တစ်ခုပေးလိုပါက ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိင်သည်။ ဤဆွေးနွေးမှုများသည် လူများအားသူတို့၏ အဆိုပြုလွှာများအတွက် မဲပေးလို၊ မလိုကိုစဉ်းစားရန် ကူညီနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးမှုများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပျက် လာမည့်အလုပ်ကို လမ်းညွှန်ရန် အတွက်အသုံးဝင်သော သွင်းအားစုများလည်း ဖြစ်သည်။
စည်းရုံးရေး၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ပမာဏကိုလက်ခံနိုင်သည်။ သင်၏ အကြံဥာဏ်ကို သင်ရောက်ရှိ နိုင်သလောက်များစွာသော လူတို့အားရောင်းရန်အခွင့်အလမ်း သင်၌ရှိသည်။ သင်၏ ပရောဂျက်ရှိသူများ၊ ဝီကီပရိုဂျက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအုပ်စုနှင့် အခြားသူများကိုဆက်သွယ်နိင်သည်။ ခြေစွပ်ရုပ်သေးလူတို့အားမဲပေးရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒမဲများကို ပြောင်းလဲရန် အတင်းအကျပ်မပြုလုပ်ရပါ။ သို့သော်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် မဲပေးပြီးထွက်သွားပါက အဆင်ပြေပါသည်။
What about smaller projects and user groups?(ဘာသာပြန်ပါ)
လူတော်တော်များများသည် မကောင်းသောအကြံအစည်ကို ထောက်ခံရန်မဲပေးပါက ဘာဖြစ်နိင်သလဲ(ဘာသာပြန်ပါ)
စန်တာဝတ်ထားသည့် ခွေးတိုင်းသည် ရပ်ရွာနည်းပညာ အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
…ယခင် စရင်းစစ်တမ်းများမှ အခြားဆန္ဒများကို ဖြေရှင်းမည့်အစား?
ကျွန်ပ်တို့ စရင်းစစ်တမ်းကို နှစ်စဉ်အဖြစ်အပျက်တခု ဖြစ်အောင်လုပ်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက လူတွေကို စရင််းများများထည့်ချင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဖွဲ့နှင့် ယခုစရင််းစစ်တမ်းကို လူအများပိုမို သိရှိလာကြသည်။ ထိပ်တန်း ဆန္ဒများကို ပြီးဆုံးပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် လူအများပါ၀င်ရန် ပိုမိုစိတ်၀င်စားကာ စိတ်၀င်စားကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ လူတိုင်းကို အတွေးအခေါ် အသစ်များယူဆောင်လာရန် အခွင့်အရေးပေးသည်။
ကျွန်ပ်တို့သည်လည်း အဟောင်းများကို စိတ်ကူးများနေဆဲဖြစ်သည် သေချာအောင် ပြုလုပ်ချင်တယ်။ ဆော့ဗ်ဝဲ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက် ပြောင်းလဲလာသည်နှင့် အမျှ သုံးစွဲသူ၏ လိုအပ်ချက်များကို လည်းပြုပြင်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပြီးခဲ့သည့် ခုနှစ်ကနေ တကယ်ကောင်းသော ဆန္ဒတော့ မဟုတ်သေးဘူး ဒါမှမဟုတ် ဖော်ပြချက် ရိုးရှင်းစွာ ခေတ်မမီမှုဖြစ်လာသည်။ နှစ်စဉ် စရင်းစစ်တမ်းကို ကောက်ယူခြင်းသည် ရပ်ရွာလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည် အတည်ပြုပေးသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ခုနှစ်စရင်းစစ်တမ်းမှ သင်နောက်ထပ် ရသင့်ရထိုက်သည်ဟု ထင်မြင်ချက်ရှိပါကအပေါ်ယံ“Can I resubmitaproposal from previous surveys?”ကိုကြည့်ပါ။
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Community_Wishlist_Survey_2017/my&oldid=21806958"
Community Wishlist Survey/my